May 2021 – BaHuTuTa
Drama ရဲ့ အမြင့်ဆုံး Rating 7.8 ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရရှိခဲ့တဲ့ ‘Law School’ ဇာတ်လမ်းတွဲ အပိုင်း(10) JTBC ရုပ်သံလိုင်းကနေ လတ်တလော ပြသနေတဲ့ တရားစီရင်ရေးနဲ့ ပက်သက်တဲ့ နာမည်ကြီး ကိုးရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ‘Law School’ မှာတော့ Kim Myung Min, […]
အင်္ဂလန်နိုင်ငံအခြေစိုက် JEM Model Agency မှာ မော်ဒယ်လ်အဖြစ် စတင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရတော့မယ့် Miss Universe အလှမယ် သူဇာဝင့်လွင် နိုင်ငံတကာရှေ့မှာ Miss Universe in best national costume ဆုကို ထိုက်တန်စွာ ဆွတ်ခူးခဲ့တာအပြင် top 21 ထိ ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ […]
(၁) ရေဝင်တဲ့ဖက်ကို ခေါင်းစောင်းထားပါ။ ပြီးရင်ဖြစိတဲ့ နားကို လက်ဖဝါးကို တင်းကြပ်နေအောင် ဖိပြီး လေဟာနယ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပါ။ ၅စက္ကန့်ထားပြီး ချက်ချင်း ပြန်လွှတ်လိုက်ပါ။ ရေမထွက်မချင်း လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ (၂) နောက်တနည်းက valsalva maneuver ခေါ်ပါတယ်။ နှာခေါင်းကို လက်နဲ့ ပိတ်ပြီး အသက်ကို ခပ်ပြင်းပြင်း […]
ရုံးပိတ်ရက်မှာ နောက်ကျမှ အိပ်ယာ ထခြင်း ဟာ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေနိုင်
နေ့ခင်းဘက် အလုပ်လုပ်ရတဲ့ လူအများစုဟာ အလုပ်လုပ်ရတဲ့နေ့မှာ အစောကြီးထပြီး အလုပ်သွားကြတဲ့အတွက် အလုပ်ပိတ်ရက်တွေမှာ နောက်ကျမှ အိပ်ယာ ဝင်ပြီး နောက်ကျမှ အိပ်ယာထ တတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို ပုံမှန် အိပ်ချိန်တွေကို စပ်ကြားစပ်ကြား ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းဟာ နှလုံးရောဂါနဲ့ ဆီးချိုသွေးချို ရောဂါတွေကို ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ လေ့လာမှု အသစ်တစ်ခုအရ သိရပါတယ်။ […]
ပေါင်အတွင်းဘက် ပွန်းပဲ့နာကျင်မှု ကာကွယ်ကုသပေးမယ့်နည်းလမ်း (၃) ခု
ပူအိုက်တဲ့နေ့တွေမှာ ကျွနု်ပ်တို့ ချွေးပိုထွက်ကြပါတယ်။ နေ့ဘက် လမ်းတွေလျှောက်တဲ့အခါ ခြေထောက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ပွတ်တိုက်မိကြလို့ ပေါင်တွေ နီမြန်း၊ ယားယံ၊ အနီကွက်တွေထပြီး တခါတရံ ပွန်းပဲ့ရာတွေ ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ အဝလွန်သူတွေမှာ ပေါင်တံအတွင်းဘက်ပွန်းပဲ့မှုပြသနာ ပိုခံစားကြတယ်ဆိုပေမယ့် ပိန်တဲ့သူတွေမှာလည်း ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ တခါတလေ ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေကြောင့် ဖြစ်ပြီး တခါတလေမှာတော့ တခြားအကြောင်းအရင်းတချို့ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ […]
သင် အင်တာနက်ဖုံး အချိန်ကြာကြာအသုံးပြု့လျှင် …………..ပြုလုပ်သင့်သည်နည်းများ
တိုးတက်လာသည့်ခေတ်ကာလအရ ဖုံး ၊ တက် တို့နှင့် အင်တာနက်ကြည့်ခြင်း ၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး စကားပြောဆိုခြင်း မည့်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမှုု့ အချိန်ကြာကြာအသုံံးပြု့ခြင်းကြောင့် လက်နှစ်ဖက်ကို သွေးသားလည်ပတ်မှု့နှင့် ကြွက်သားလှုပ်ရှားပေးရန် လိုအပ်သဖြင့် လေ့ကျင့်ခန်း လိုအပ်ပါသည် ။ အပန်းမကြီးပါဘူး လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ ။ သင့်သည့် ဖုံးဖြင့် အသုံးပြု့ချိန်ကြာမြင်နေလျှင် လက်နှင့် […]
8. Swarovski Crystal Head Fountain, Austria 7. Waitomo, New Zealand 6. Carhenge, USA 5. Device to Root Out Evil, Mallorca 4. Cube Houses in The […]
ရုတ်တရက် ကြွက်တက် ရင် ချက်ချင်း သက်သာစေမည့် နည်းလမ်း
ရုတ်တရက် ကြွက်တက်ရင် ချက်ချင်း သက်သာစေမည့် နည်းလမ်း ခြေဖဝါးကို လှန်ပြီး နှိပ်ပါခြေထောက်ကြွက်တက်ခြင်း ဆိုတာကို လူတိုင်း မကြုံဖူးပေမယ့် ကြားတော့ ကြားဖူးကြမှပါ။ ကြွက်တက်ခြင်း ဖြစ်တတ်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေနဲ့ ဖြေရှင်းနည်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကြွက်တက်ခြင်းဆိုတာ ခြေသလုံး အနောက်ဘက်နေရာက ကြွက်သားတွေ ကိုက်ခဲတင်းမာလာပြီး တအား နာကျင်လာတတ်တဲ့ […]
ကိုယ်ဝန် ဆောင်စဉ် ဝမ်းချုပ်ခြင်းဟာ အဖြစ်များလား
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလဟာ အမျိုးသမီးတယောက်အတွက် အင်မတန်မှကို ကရိကထများတဲ့ အချိန်ကာလဖြစ်သလို ဂရုတစိုက်စောင့်ရှောက်ရမယ့် ကာလလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ ဆောင်းပါးလေးမှာတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကာလ တွ့ကြုံရမယ့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေထဲက တခုဖြစ်တဲ့ဝမ်းချုပ်ခြင်းအကြောင်း ဆွေးနွေးမျှဝေပေးသွားမှာပဲ ဖစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဘာလို့ဝမ်းချုပ်သလဲ။ ဝမ်းချုပ်ခြင်းဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ အဖြစ်များပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ထက်ဝက်လောက်မှာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဝမ်းချုပ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတခုကတော့ ပရိုဂျက်စတီရုန်း […]
သားသမီး မလိမ္မာသူများ, မိဘစကား နားမထောင်သူများ, ဆိုဆုံးမရ ခက်နေသူများ, စာမကြိုးစားသူများ, အရာရာ ကြိုးစားချင်စိတ် နည်းနေသူများ ကြုံနေပါက ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ဓာတ်ပုံရဲ့ နောက်ကျောမှာ (ရေးရန် စမကို) ဆော့ပင်, မာကာပင်နဲ့ ထင်ထင်ရှားရှား ရေးပါ။ ရေးရမဲ့အချိန်က မနက် (ရး၀၀)နာရီမှ (၉း၀၀)နာရီအတွင်း ဖြစ်ပြီးရေးနေဆဲခဏမှာလဲ […]